Thumela ngaphezulu kokubhaliweyo xa uncokola kwiiMicrosoft Teams
I-5 yosuku lwe-prednisone
Ukungenisa isicatshulwa kwisiteshi seMicrosoft okanye incoko yeyona ndlela ixhaphakileyo yokuthumela umyalezo kwabanye kwiqela. Nangona kunjalo, ungathumela ngaphezulu kokubhaliweyo. Ungathumela ii-emojis, ii-GIF, izitikha, kunye nokuncamathisela iifayile. Olu khetho luvela emazantsi ebhokisi yokubhaliweyo apho uchwetheza umyalezo wakho, njengoko kubonisiwe.
Ukhetho lweengxoxo ezongezelelweyo.
Ukongeza ii-emojis, ii-GIF, kunye nezitikha
I-Emojis ziimpawu ezincinci ezibonisa imvakalelo. Umzekelo, ubuso obunoncumo bubonisa ulonwabo kwaye ubuso obonwabileyo bubonisa ukudana. Uya kufumana ii icon ze-emoji zazo zonke iimilo kunye nobukhulu kunye neentsingiselo. Ungathumela i-emoji ngokunqakraza kwi icon ye-emoji uze ukhethe i-emoji ofuna ukuyisebenzisa.
Ukongeza i-emoji kumyalezo wakho.
Amaqela afaka iindlela ezimfutshane zokubhaliweyo onokuzichwetheza ukuze ungakhethi i-emoji ngemouse yakho kuluhlu lwezinto onokukhetha kuzo. Umzekelo, ukuthumela ubuso obonwabileyo, ungachwetheza ikholoni (:) elandelwa ngumzali wokuvala ()). Xa uthayipha olu luhlu lwabalinganiswa, i-emoji yobuso obonwabileyo iya kongezwa ngokuzenzekelayo kwingxoxo yakho. Unokuchwetheza igama eliphambili ngaphakathi kubazali ukuze wenze i icon ye-emoji. Ezinye ze-emoji eziqhelekileyo kunye namagama abo amfutshane ayaboniswa. Uluhlu olupheleleyo lunokufumaneka kwi i-portal yoqeqesho lweOfisi 365 .
I-GIF ngumfanekiso woopopayi. Amaqela eMicrosoft aquka ii-GIF ezininzi ezaziwayo. Umzekelo, kunokubakho ikati ezamayo okanye impendulo yomlinganiswa ovela kumdlalo othandwayo kamabonwakude. Ungazifaka ezi kliphu zifutshane kumyalezo wakho wengxoxo njengee-GIF ngokunqakraza kwi icon yeGIF emazantsi ebhokisi yokubhaliweyo.
Izitikha yimifanekiso emifutshane yohlobo oluhlekisayo. Umzekelo, umzobo onebhaluni yentetho phezu komntu. Ukuba ukhe wayifunda UDilbert isiqhulo esihlekisayo, emva koko unokuba nomfanekiso wokuba zibukeka njani ezi zincamathelisi. Amaqela kaMicrosoft aquka uninzi lweencamathelana ezithandwayo, kwaye ungongeza ngokwakho. Ukongeza isitikha kumyalezo wakho kuyaboniswa.
Ukongeza isitikha kumyalezo wakho.
Ukongeza kwii-emojis ezimnandi, ii-GIF, kunye nezitikha, unokongeza ifayile kumyalezo wengxoxo. Umzekelo, unokusebenza kwi-spreadsheet ye-Excel kwaye ufuna ukuyifaka kwingxoxo. Unokongeza ifayile kumyalezo wakho wengxoxo usebenzisa i-icon ye-paperclip, njengoko kubonisiwe. Unokukhetha ifayile osanda kusebenza kuyo, ukhangele iifayile esele zilayishwe kwiiQela, ukhethe ifayile kwi-OneDrive, okanye ulayishe ifayile kwikhompyuter yakho.
Xa uncamathisela ifayile kwisiteshi, ifayile iyavela kwi Iifayile isithuba phezulu kwitshaneli. Iithebhu zeefayile yindawo ye-SharePoint emva kwezigcawu. Ungayibona ithebhu yeefayile ngaphezulu komzobo phakathi kwethebhu yeeNgxoxo kunye nethebhu yeWiki.
Ukuncamathelisa ifayile kumyalezo oza kuthunyelwa kwijelo.
Ukuphendula kwimiyalezo yencoko
Xa umntu echwetheza umyalezo, ungasabela kuwo endaweni okanye ukongeza ukuwuphendula. Ukuya phendula kumyalezo kuthetha ukuvuma ukuba uyibonile incoko. Umzekelo, unokuphendula nge-emoji enje ngezithupha, isimanga se-emoji, okanye abanye abaninzi. Ukuphendula kumyalezo, ungabeka imouse yakho kumyalezo okanye ukhethe i-ellipsis ukuba usebenzisa isixhobo esiphathwayo kwaye uchukumise isikrini, emva koko ukhethe impendulo. Kulo mzobo ulandelayo, ndiphendula umyalezo onesithupha esiphakamileyo se-emoji ukubonisa ukuba ndiyawuthanda umyalezo kwaye ndiyawuvuma.
Ukuphendula kumyalezo onesithupha.
Ukuba omnye umntu sele enike impendulo, njengezithupha, impendulo yakho iya kwandisa inani elivela ecaleni kwempendulo efanayo. Umzekelo, ukuba umntu osebenza naye unikezele ngobhontsi, kwaye uphendule ngezithupha ezifanayo, inani elincinci elingu-2 liya kuvela ecaleni koobhontsi be-emoji. Ukuphendula kunokuba kubalulekile ukuvuma umyalezo ngaphandle kokuchwetheza impendulo.
I-clonidine 0.2 mg ithebhu
ungayenza njani i-asvab
ibuprofen ichanekile nge-thc
ukumisa i-gabapentin turkey ebandayo
Ipilisi eblue 44 473
ukongeza nokususa amakhiwane esig
ukusetyenziswa kokhula lweebhokhwe olutshisayo